Breaking News : Mindat ah SAC phu an hraang peng rih – Buanchukcho
Breaking News : Mindat ah SAC phu an hraang peng rih
Mindat ah SAC phu an hraang peng rih. Inn chung ah aa duup mi kum 10 ngakchiaahngawng ah an khen iazualhma ngai nain sii-ai lei bawmhchanh duh zong ah luhchuah khawhasi lo. Innka le dawrkhaan pawl an bauh i thil an fir. Khuami ca ah innchung um ziar zongahim ti lo i ramtang ah zaam le i duup zongahim ti lo, tiah an thanh.
– ယနေ့ (17.5.21) မနက်ပိုင်းမှစ၍ ​မင်းတပ်မြို့ တစ်မြို့လုံးနေရာအနှံ့ စကစ တပ်သားများက..- အမြှောက်လက်နက်ကြီးများ – မော်တာမောင်းပြန်သေနတ်များ ဖြင့် အဆက်မပြတ်ပြစ်ခတ်နေ သောကြောင့် လူနေအိမ်များထိခိုက်ပျက်စီး ဒဏ်ရာရသူများရှိပြီး..
– အိမ်ထဲ ပုန်းနေသော ၁၀ နှစ်ဝန်းကျင် ကလေးမလေး တစ်ယောက် လည်ပင်းကို ကျည်ထိမှန်ထားပါတယ်။ ကျည်ထိမှန်ထားသော ကလေးမှာ စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ ဆေးအဖွဲ့များ ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များလည်း လုံးဝ သွားလာလို့မရကြပါ။ စကစတပ်များက တွေ့သမျှ၊ မြင်သမျှကို ပစ်နေကြပါတယ်။
ထို့အပြင်..- မြို့ထဲရှိ စျေးဆိုင်များ လူနေအိမ်များကိုတံခါးဖျက်၍ အကြမ်းဖက် ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းများအား ခိုးယူခြင်းများပြုလုပ်နေကြပါသည်။ – စကစ တပ်များဟာ မြို့ထဲကို နေ့ရောညရော ရမ်းသမ်း ပစ်ခတ် ခြိမ်းခြောက်နေကြတာပါ.. အခုအခြေအနေက အိမ်ထဲနေလဲမလုံခြုံ တောထဲရှောင် လဲမလုံခြုံတော့တဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပါပြီ။ The Hakha Times
SAC Ralkap kut in nunnak liam mi Khamh Bawi ruakhleng vuinak Thangzang ah tuah